Ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa gacanta ku dhigay mid kamida askarta dowladda Federaalka ee oo tababar melleteri ay siisay mid kamida dowladaha shisheeye ee ku lugta leh duullaanka Soomaaliya.
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in howlgal ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo gobollada dhexe lagu qabtay mid kamida ciidamada DF-ka ee ay tababartay imaaraatka carabta, askariga oo isku dhax qarinayay gaari BL ah ayaa gacanta lagu dhigay.
Maxkamad islaami ah oo taabacsan wilaayada Hiiraan ayaa xukun dil ah ku fulisay dable Sahal Axmed Rafle oo kamid ahaa ciidamada Imaaraatku tababaray, askariga ugacan galay Alshabaab kadibna ladilay ayaa kusii jeeday degmada Caabud Waaq ee gobolka Galguduud.
Fagaare kuyaal degmada Buq-aqable ayaa lagu toogtay askariga, qaaddiga maxkamadda xukunka ridday ayaa sheegay in askarigu qirtay dhammaan dambiyadii lagusoo eedeeyay wuxuuna maxkamadda ka hor sheegay in lasiiyay lacago si uu diyaarad ugu raaco balse isagu uu naftiisa ka bakhiilay uuna go'aansaday in uu safarka dhanka ah ku aado Caabud Waaq.
Al Shabaab ayaa cid walba oo katirsan DF-ka iyo maamul goboleedyada ka aaminsan kuwa diinta islaamka ka baxay dil ayayna ku fulisaa askarta iyo saraakiisha ay gacanta ku dhigto laakin kuwa isku dhiibo ma disho oo soo dhoweyn ayay usameysaa.